Fomba maro kokoa hikendrena ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao | Fifamoivoizana hiara-miasa
by on Jona 14, 2021
Raha manana serivisy an-tserasera ianao, dia tokony ho anao fotsiny ny mino ny kendrenao fivezivezena amin'ny tranonkala. Ny toerana dia miova isaky ny min'ny andro ary miankina amin'ny tranonkala fifamoivoizana entina mankany amin'ny tranonkalanao.
Rationale izay milalao etsy ambany dia ny ahatongavanao hisintona olona hahitana ny tranonkalanao. Ny fanehoan-kevitra izay homen'izy ireo dia azo antoka fa ho tonga mety hanananao mpitsidika tranonkala marobe. Manome soso-kevitra bebe kokoa aza ny fifamoivoizana an-tranonkala ho an'ny tranonkalanao.
Misy fomba isan-karazany amin'ny fomba tena ahafahanao manana fahaizana mikendry ny fivezivezena tranokala mankany amin'ny tranokalanao. Anisan'izany ny dokam-barotra amin'ny alàlan'ny fanaovana dokambarotra, ahazoana antoka ny fametrahana ireo tag HTML amin'ny tranokalano, ary aorian'izany dia miresaka momba ny tranokalan'ny hafa. Raha mila famaritana fanampiny dia manohiza mamaky etsy ambany.
Ny dokam-barotra fanoratana dia iray amin'ireo andrana andrana ary koa teknika nodinihina hahazoana mpitsidika tranonkala kendrena mankany amin'ny tranonkalanao. Arakaraka ny maha-lalina kokoa ny pejin-tranonkalanao, no vao mainka maro ireo mpitsidika tranonkala azonao antoka.
Ahoana raha tsy manana fironana amin'ny famoronana ny atiny tranokala anao ianao?
Ny mety dia mety tsy manana fotoana ampy ianao hiatrehana asa iray hafa miaraka amin'ny fitantanana ny tranokalanao sy ireo olana hafa an-tserasera.
Ny zava-drehetra, ny olana voalohany aminao dia ny fahafahanao manolotra ireo mpijery anao fitaovana avo lenta amin'ny pejin-tranonkalanao. Ary koa amin'ny fifampiraharahana lehibe amin'ny fitantanana ary koa ny asa fanaovana dokambarotra eo am-pelatananao, tsy afaka mandray asa fanampiny ianao, na izany aza, satria mila mametraka ny sainao amin'ny fahazoana ny fifamoivoizana an-tranonkala ianao ary koa mitarika, azonao atao ny manafoana ny an'ny olona iray hafa vahaolana amin'ny dokam-barotra bebe kokoa momba ny tetikasa doka sy varotrao. Azonao atao hatrany ny mampiasa mpampiasa matoatoa ho an'ny tranonkalanao.
Paikady fanampiny hahazoana fifamoivoizana tranonkala bebe kokoa dia ny fampiasana ny firesahana amin'ireo bilaogin'olon-kafa. Olona maromaro no mijanona tsy miasa intsony hahafantatra ny fahombiazany. Amin'ny fijerena ireo tranokala bilaogy tianao indrindra ary koa ny famelana ny resaka ara-tsaina momba ny foto-kevitra fantatrao miaraka, ireo izay mahatratra ny famerenanao ny lahatsoratry ny bilaoginao dia mety hiafara amin'ny fahalianana hanaraka ny rohy Interneto ary hahita bebe kokoa momba anao ary koa ny zavatra ianaranao momba ny lohahevitra iray manokana izay mampiahiahy azy ireo.
HTML na fiteny markup hypertext dia mety ho teknolojia kely ho an'ny hafa. Hitanao fa zava-dehibe ny fampidiranao ireo marika lohateny marina mba hampisehoan'ireo motera fikarohana avy hatrany ny info izay mamintina izay manodidina ny tranokalanao. Misy ireo andian-teny lakile ilaina ary koa fitenenana ao amin'ny Meta Teny manan-danja tag ary koa famintinana Meta.
Araka ny efa fantatrao ankehitriny, dia tsotra ny mikendry ny fivezivezena amin'ny Internet amin'ny tranokalanao natolotra anao hahafantatra zavatra hatao. Maninona no mangataka andro rehefa azonao ny fametrahana ny pejin-tranonkalanao amin'izao fotoana izao?
Ny toerana dia manova isaky ny minitra ny andro ary miankina amin'ny fifamoivoizana an-tranonkala entina mankany amin'ny tranokalanao.
Ny hevitra iray manontolo izay lalaovina etsy ambany dia ny azonao anovozana olona hahitanao ny tranonkalanao. Misy fomba isan-karazany amin'ny fomba hahafahanao mikendry ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao amin'ny tranokalanao. Ny dokambarotra sy ny varotra aorian'izay dia iray amin'ireo fanandramana andrana ary fanombanana ihany koa amin'ny fanaovana mpitsidika tranonkala kendrena mankany amin'ny tranonkalanao. Hitanao fa zava-dehibe ny fampidiranao ireo marika lohateny marina mba hanehoan'ny motera fikarohana avy hatrany ny info izay mamintina izay manodidina ny Internet anao.